Le Inkinobho Yasekhaya ye-iPhone 7 ne-7 plus. Nge-3D Touch | Ngivela kwa-mac
Siwalandele amahemuhemu izinyanga. Sibonile i-iPhone 7 ne-7 plus enkulumweni esemqoka esiteji. Imanzi futhi yomile. Ngemibala emihlanu ehlukene, omunye wabo onokuphela okusha, nangamasayizi amabili amahle. Futhi ekugcineni sikwazile ukubeka izandla zethu kukho, sizame futhi sikuthenge. Hhayi mina okokugcina, kepha ngoba usuvele uyazi ukuthi angicabangi ukuthi ukweqa kusuka ku-6 kuye ku-7 kukufanele.
Namuhla ngifuna ukukhuluma kafushane, ngaphandle kokuthatha isikhathi eside, Inkinobho yasekhaya entsha. Yize isendaweni efanayo futhi inobukhulu obufanayo, ayifani nakancane nenye i-iPhone noma i-iPad. Ingabe yena Isinyathelo sokugcina ngaphambi kokususwa kwenkinobho nokuhlanganiswa kwayo okugcwele esikrinini.
1 Inkinobho yasekhaya yokuvalelisa, Sawubona 3D Touch
2 Ikusasa le-iPhone neNkinobho Yasekhaya
Inkinobho yasekhaya yokuvalelisa, Sawubona 3D Touch
Uma ngabe ube nethuba lokuxoxa ngenye yamadivayisi we-Apple, kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi kuzwakala kwehluke kakhulu ekuthintweni. Umuntu, futhi kakhulu okukhombisa. Kanjalo Chofoza wanyamalala. Manje uzizwa kudlidliza okufanayo uma uyithinta oyizwa nge-3D Touch esibukweni. Ubuchwepheshe obufanayo nendlela efanayo. Vele, futhi enziwa ngezifiso ngokususelwa kwingcindezelo namandla. Ngokuthanda kwakho Asibhekene nenkinobho, kepha kunalokho isandiso sesikrini. Ingxenye yangaphandle yento efanayo esiyithintayo futhi siyicindezele nsuku zonke.
Ukuze ungashintshi ukwakheka futhi kungabandakanyi ushintsho oluzumayo, ngaphezu kokukwazi ukugcina okhethekile ngonyaka ozayo, i-Apple ivuselele isikhala senkinobho yasekhaya futhi sayivumelanisa nalokho okuzoba ikusasa nge-iPhone yeminyaka eyishumi. Sekuyisikhathi eside silindelwe futhi silangazelelwe unyaka we-2017. Angingabazi ukuthi i-Apple ifuna ukuthatha lesi sinyathelo siye phambili. Ususe i-headphone jack, ufake izipikha ezinhle kakhulu emzimbeni we-iPhone yakho. Ku-stereo, njengoba ezinye izinkampani zenzile, nangamandla amakhulu. Bengibazihlola esitolo ngaze ngenza nokuqhathanisa ne-iPhone 6 futhi umsindo awuhlangene ngalutho nawo. Ku-iPhone 6 yami bengingezwa lutho ngevolumu ephelele, futhi i-7 izwakale ngaphandle kwenkinga. Konke lokhu kuphakathi kweSitolo se-Apple ngesiphithiphithi esivame ukwenzeka.
Engifuna ukukusho ukuthi kunezinguquko eziningi zangempela futhi eziphawulekayo kulesi sizukulwane, kepha azibonwa ngokugqoka umklamo ofanayo. Ukube basusa isikhala kunkinobho yasekhaya basifaka esikrinini esifanayo, esivele sikhona, ngabe basimangazile.
Ikusasa le-iPhone neNkinobho Yasekhaya
Yi-3D Touch kuma-iPhones ne-MultiTouch kuma-iPads abulala inkinobho yasekhaya. I-Apple ingayisusa ngonyaka ozayo i-2017 kumadivayisi wayo weselula we-4,7 no-5,5-intshi. Kungaba yinto enengqondo kunazo zonke ukwenziwa futhi kungasetshenziselwa ukuguqula ukwakheka kakhulu. Sebenzisa indawo emzimbeni we-terminal noma uhlele kabusha izingxenye zayo. Susa amamagethi nemingcele nokunye okuningi. Isikrini esiningi nemisebenzi emzimbeni ofanayo. Ukuthi ihlala kulula ukuyibamba ngisho nokusetshenziswa kwesandla esisodwa, kepha ingaba nesikrini esiningi.
Inkinobho yasekhaya icishe ifile. Njengoba sibonile kuma-iPhone 6s nangaphambilini ngeke kulandele. Eqinisweni, lokhu akusenjalo. Ku-7 yisikrini esine-3D Touch nakwi-iPad yize singakashintshi, ngicabanga ukuthi kufanele basuse noma benze ukulungisa okuthile ukuze lawa madivayisi alandele ukuvela kwe-iPhone. Empeleni, kuma-iPads, inkinobho yasekhaya ayisebenzi. Iyakwazi futhi iyasetshenziswa. Izigxivizo zeminwe, ukuvala izinhlelo zokusebenza nokuningi, kepha kukho konke lokhu sekukhona ukuthinta komunwe esikrinini. Angisebenzisanga inkinobho iminyaka engu-2. Futhi i-ID yeTouch ingayihlanganisa nasesikrinini.
Kuzodingeka ukubona ukuthi iziphi izinguquko ezenziwa yisoftware nezingxenyekazi zekhompuyutha ukuze inkinobho yasekhaya ibe sesikrinini ngaphandle kokuphazamisa ukwakheka noma i-interface yokuqhafaza.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Amahemuhemu » Le Inkinobho Yasekhaya ye-iPhone 7 ne-7 plus. Nge-3D Touch